SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Ashaninka Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Karo) Batak (Toba) Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Galician Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Marathi Maya Motu Mutauro Wemasaini WekuJamaica Mutauro Wemasaini wechiBelgian French Mutauro Wemasaini wechiChinese Mutauro Wemasaini wechiCzech Mutauro Wemasaini wechiDutch Mutauro Wemasaini wechiFrench Mutauro Wemasaini wechiGreek Mutauro Wemasaini wechiPortuguese Mutauro Wemasaini wechiQuebec Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wechiSwiss German Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuAustria Mutauro Wemasaini wokuBolivia Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuBritain Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuCosta Rica Mutauro Wemasaini wokuCroatia Mutauro Wemasaini wokuCuba Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuEl Salvador Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuGhana Mutauro Wemasaini wokuGuatemala Mutauro Wemasaini wokuHonduras Mutauro Wemasaini wokuHungary Mutauro Wemasaini wokuIndia Mutauro Wemasaini wokuIndonesia Mutauro Wemasaini wokuIreland Mutauro Wemasaini wokuIsrael Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuKenya Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuMadagascar Mutauro Wemasaini wokuMalawi Mutauro Wemasaini wokuMalaysia Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuMozambique Mutauro Wemasaini wokuNew Zealand Mutauro Wemasaini wokuNicaragua Mutauro Wemasaini wokuNigeria Mutauro Wemasaini wokuPanama Mutauro Wemasaini wokuParaguay Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuPhilippines Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuRussia Mutauro Wemasaini wokuSlovakia Mutauro Wemasaini wokuSlovenia Mutauro Wemasaini wokuSouth Africa Mutauro Wemasaini wokuSweden Mutauro Wemasaini wokuTaiwan Mutauro Wemasaini wokuThailand Mutauro Wemasaini wokuUruguay Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Mutauro Wemasaini wokuZambia Mutauro Wemasaini wokuZimbabwe Myanmar Navajo Nepali Nias Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Pennsylvania German Persian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Singapore Sign Language Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Uzbek Uzbek (Roman) Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Xhosa Yoruba Zulu
Kurara nevanhu kusingabvumirwi uye kurara nemhuka (1-30)
Musatevedzera vaKenani (3)
Kurara nemunhu weukama (6-18)
Kurara nemunhu ari kumwedzi (19)
Kurara nemhuka (23)
‘Rambai makachena kuti nyika isazokurutsai’ (24-30)
18 Jehovha akaenderera mberi achitaura naMozisi, achiti: 2 “Taura nevaIsraeri uti kwavari, ‘Ndini Jehovha Mwari wenyu.+ 3 Musaita zvinoitwa nevanhu vemunyika yeIjipiti kwamaigara, uye musaita zvinoitwa nevanhu vemunyika yeKenani, kwandiri kukuendesai.+ Uye musatevedzera mirau yavo. 4 Munofanira kuchengeta mitongo yangu, uye munofanira kuchengeta mirau yangu moitevedzera.+ Ndini Jehovha Mwari wenyu. 5 Munofanira kuchengeta mirau yangu nemitongo yangu; ichaita kuti munhu wese anoichengeta ararame.+ Ndini Jehovha. 6 “‘Pakati penyu hapafaniri kuva nemunhu anoswedera pedyo nehama yake yepedyo kuti arare nayo.*+ Ndini Jehovha. 7 Usarara nababa vako, uye usarara naamai vako. Ivo ndiamai vako, uye haufaniri kurara navo. 8 “‘Usarara nemudzimai wababa vako.+ Unenge uchinyadzisa baba vako.* 9 “‘Usarara nehanzvadzi yako, angava mwanasikana wababa vako kana kuti mwanasikana waamai vako, pasinei nekuti makaberekwa muimba imwe chete kana kuti hamuna.+ 10 “‘Usarara nemwanasikana wemwanakomana wako kana kuti mwanasikana wemwanasikana wako, nekuti ivo kusapfeka kwako. 11 “‘Usarara nemwanasikana wemudzimai wababa vako, mwana wababa vako, nekuti ihanzvadzi yako. 12 “‘Usarara nehanzvadzi yababa vako. Iyo ihama yepedyo yababa vako.+ 13 “‘Usarara nemukoma kana munin’ina waamai vako, nekuti ihama yepedyo yaamai vako. 14 “‘Usanyadzisa munin’ina wababa vako* nekurara nemudzimai wavo. Ivo ndimainini vako.+ 15 “‘Usarara nemuroora wako.+ Iye mudzimai wemwanakomana wako, saka usarara naye. 16 “‘Usarara nemudzimai wemukoma kana munin’ina wako,+ nekuti unenge uchinyadzisa mukoma kana munin’ina wako.* 17 “‘Usarara nemukadzi pamwe chete nemwanasikana wake.+ Usatora mwanasikana wemwanakomana wake uye mwanasikana wemwanasikana wake kuti urare naye. Ivo ihama dzake dzemumba; iko kuita zvinhu zvakafumuka.* 18 “‘Usatora munin’ina wemudzimai wako kuti ave mudzimai wako wechipiri+ kuti urare naye mukoma wake achiri mupenyu. 19 “‘Usaswedera pedyo nemukadzi kuti urare naye panguva yaanenge asina kuchena ari kumwedzi.+ 20 “‘Usarara nemudzimai wemumwe murume,* uchizvisvibisa.+ 21 “‘Usabvumira kuti vana vako vapirwe* kuna Moreki.+ Usasvibisa zita raMwari wako saizvozvo.+ Ndini Jehovha. 22 “‘Usarara nemunhurume sekurara kwaunoita nemukadzi.+ Zvinosemesa. 23 “‘Murume haafaniri kurara nemhuka kuti asvibiswe nayo; uye mukadzi haafaniri kumira pamberi pemhuka kuti akwirwe nayo.+ Izvi zvinopesana nemasikirwo akaitwa zvinhu. 24 “‘Musazvisvibisa nezvinhu izvi zvese, nekuti marudzi andiri kudzinga pamberi penyu akazvisvibisa nezvinhu izvi.+ 25 Saka nyika yacho haina kuchena, uye ndichairangira kutadza kwayo, yorutsa vagari vayo.+ 26 Asi imi munofanira kuchengeta mirau yangu nemitongo yangu,+ uye hapana anofanira kuita chero chinhu chipi zvacho pazvinhu izvi zvinosemesa, angava munhu wemunyika yenyu kana kuti mutorwa ari kugara pakati penyu.+ 27 Nekuti zvinhu zvese izvi zvinosemesa ndizvo zvaiitwa nevanhu vakatanga kugara munyika yacho imi musati masvika,+ uye iye zvino nyika yacho haina kuchena. 28 Saka nyika yacho haizokurutsai sekurutsa kwaichaita marudzi amuchawana ariko nekuti munenge musina kuisvibisa. 29 Kana pakaita munhu anoita chero chimwe chezvinhu izvi zvinosemesa, wese anenge azviita anofanira kubviswa pakati pevanhu vake.* 30 Munofanira kuita zvandakakurayirai kuti murege kutevedzera tsika dzese dzinosemesa dzaiitwa imi musati mauya,+ kuti murege kuzvisvibisa nadzo. Ndini Jehovha Mwari wenyu.’”
^ ChiHeb., “kuti aifukure.”
^ ChiHeb., “Iko kusapfeka kwababa vako.”
^ ChiHeb., “Usafumura kusapfeka kwemunin’ina wababa vako.”
^ ChiHeb., “iko kusapfeka kwemukoma kana munin’ina wako.”
^ Kana kuti “itsika dzinonyadzisa.”
^ Kana kuti “wemuvakidzani wako; weshamwari yako.”
^ Kana kuti “vabayirwe.”